Category9– July – 2012 – Nepalnews: Nepal Everest News Edition: नेपाली||English||Links | मुख्य समाचार
Date archive forJuly 9th, 2012 By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments ऐया नचिमोट ! चीनको स्वशासित क्षेत्र बानशेङमा एक आपसमा खैल्दै स्थानीय बालबालिका । फोटोः सिन्ह्वा
More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments सुन्दर नग्नता ! अष्ट्रियामा भइरहेको १५ औं ‘वल्र्ड बडी पेन्टिङ फेस्टिभल’मा नग्न शरिरमा पेन्टिङ More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments प्रदर्शनीमा उप्रेती भृकुटीमण्डपमा भइरहेको पुस्तक प्रदर्शनीमा आफ्नो पुस्तकका साथ पाठकहरु माझ लेखक More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments सुन्दरीघाटमा टहरा थापाथलीस्थित बागमती किनारबाट उठाइएका सुकुम्बासीहरु ललितपुरको सुन्दरीघाटमा More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments छानविनका लागि प्रकाश दाहाल निलम्बनमा काठमाडौं, असार २५ । एकीकृत नेकपा माओवादीले नेवा राज्य समिति सदस्य प्रकाश दाहाललाई More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments करातेंको लागि छट्टै भवन निर्माण गरिने काठमाडौं, असार २५ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव युवराज लामाले करातँे More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments मदिरा उद्योग समस्यामा, सरकारको ध्यान नगएको गुनासो मोरङ, असार २५ । देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएको मदिरा उद्योगप्रति अहिलेसम्म More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments एमाओवादी बैठकमा प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश काठमाडौं, असार २५ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments वित्तीय संस्थाहरु गाभिने क्रम बढ्यो कैलाली, असार २५ । एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटैमा गाभेर बलियो More... By Nepalnews: Nepal Everest News On Monday, July 9th, 20120Comments रोजगारमुखी तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध काठमाडौं, असार २५ । रोजगारी र मर्यादित काम सिर्जना गर्न आवश्यक भूमिका र क्षेत्रको More... Next Page »